Tarisa mukwende wako: Tom Cruise anopenga nezve masutukesi akaba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hospitality Industry » Tarisa mukwende wako: Tom Cruise anopenga nezve masutukesi akaba
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • ushanyi • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Tom Cruise achikwenya kupenga
Iwe waizofunga seimwe yeanonyanya kufarirwa nyeredzi dzeHollywood mupasi, iwe unenge uri mune imwe ligi, asi sezviri pachena kwete.
Mutambi wemufirimu wekuUS Tom Cruise parizvino ari kupfura firimu rake reMission Impossible 7 kuUnited Kingdom. Funga kuti superstar saiye angave asina kunetseka pamusoro pezvinhu zvakabiwa kunyanya nevarindi vanochengetedza hupenyu, mitezo, uye zvinhu?
Funga zvakare, nekuti Tommy mukomana akatora mukwende wake wese kusanganisira zvinhu zvake zvakabiwa izvo zvaive zvichiri mumotokari mushure mekunge asvika kuUK.
Uye kwete, kwete mukwende chete wakabiwa, iyo BMW X7 auto pachayo yakabiwa kutanga.
Kunyangwe mota ichiwanikwa pamwe nekushandisa kweyekutevera mudziyo, zvese zviri mukati memotokari zvakange zvaenda.
Cruise akange aenda kunotora firimu nemutambi Hayley Atwell. Akanga achigara kuGrand Hotel muguta reBirmingham achitora mifananidzo munzvimbo iri padyo yekutengesa Grand Grand pakaitika kuba.
Iyo BMW X7 yakamiswa pahotera pakaitika kuba. Kubira kwave kunzi se "high tech" uchishandisa 4-nhanho maitiro ayo akabvumira iyo isina kiyi mota kuvhurwa nekudzokorora iyo fob chiratidzo ine inotepfenyurisa.
Izvo zvataurwa kuti makororo akatiza nezviuru zvemakirogiramu emutoro anochengetwa nemuchengeti waCruise. Pamwe muchengeti aifanira kunge akarairwa chete "mutumbi", asi zvirimo mumotokari yake futi.
Chiitiko ichi chakaitika muBirmingham uye kunyangwe mapurisa akakurumidza kutsvaga nekutsvaga mota vachishandisa mudziyo wekutevera wemagetsi iyo mota yaive iine, kana yawanikwa, pakanga pasisina zvemukati zvakasara mumotokari.
Mapurisa akati vakagamuchira mushumo weBMW X7 (yakakosha zana remapaundi) yakabiwa kuChurch Street, Birmingham, munguva dzekutanga dzeChipiri mangwanani. Iyo mota yakawanikwazve nguva pfupi yapfuura muSmethwick. Mibvunzo yeCCTV yakaitirwa nzvimbo yakawanikwa mota sezvo kuferefetwa kuri kuenderera mberi.
Tom ndemumwe wevatambi vanobhadharwa zvakanyanya muHollywood ane mambure anokosha emadhora mazana matanhatu emadhora mazana matanhatu anotambira madhora zviuru makumi mashanu pagore. Sekuwanda kweanogadzira bhaisikopo, semuenzaniso, Cruise yakawana US $ 600 mamirioni kubva yechina Mission: Hazviite bhaisikopo, Ghost Protocol. Iye anozivikanwa nekuita zvese zvake zvimisikidzo uye achiendesa akawanda mibairo-kuhwina mibairo. Iye anozivikanwa zvakanyanya nemafirimu akaita saMission Impossible akateedzana, Top Gun, Minority Report, uye Vanilla Sky.
Sekureva kwemishumo, Tom Cruise akatsamwa nezve kuba.
Svondo 1, 2021 pa 06: 18
Seta ivo vaive neakarongwa zvakanaka Ku,, ndinovimba dzaingova mbatya dzinozove dzisina basa kuma bastards. Wish them karma yakaipa uye ivo vanozoiwana.